SQBO: Seenaa Qabsaa’aa Oromoo gameessa Obbbo Fiqaaduu Magarsaa Guddataa (1954-2021) – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSQBO: Seenaa Qabsaa’aa Oromoo gameessa Obbbo Fiqaaduu Magarsaa Guddataa (1954-2021)
SQBO: Gabaasa (28/10/2021) Seenaa Qabsaa’aa Oromoo gameessa Obbbo Fiqaaduu Magarsaa Guddataa (1954-2021)
Obbo Fiqaduu Magarsaa abbaa isaanii obbo Magarsaa Guddataa Tufaafi, haadha isaanii addee Kuulii Nagaa Damboobaa, irraa,Sadaasa 13,1954 Godina Shaggar lixaa aanaa Meettaa-Roobii kessatti dhalataan.
Obbo Fiqaduun dhalataanii daa’ima waggaa 3 ugguu ta’an abbaafi haadha isaanii,maatii qabaan mara dabalatee, weerartoota habashootaatiin dirqamaanii dachee irratti dhalataanii guddataan gadi dhisaanii akka irraa godaanan godhamaan. Weerarri qe’ee isaanii irraa buqqisee akka goodanaan isaan godhe kana adda durummaan kan gaggeessan Qeesoota habashootaa Gondor irraa dhufan akka ta’e obbo Fiqaduun maatii isaani irraa dhagayaanii jiru.
Maatiifi firoottaan isaanii lakkoofsaan gara 200 kan ta’an, yeroo tokkotti buqqa’anii, biyya isaanii alagadhaaf gad-dhisaanii akka irraa goodanaan dirqamaan. Obbo Fiqaduun, daa’imini waggaa 3 tahee maatii isaanii waliin erga buqqaaniin booda, kutaa Arsii naannoo Albasoo, gaara Tulluu kaakaa jedhamee beekamu qubatan. Obbo Fiqaduufi maatii isaaniif, naannoo Tulluu Kaakkaa kana keessa jiraachuun akka waan jannata keessa jirataanii kan namatti tolu ta’e tokkootti yeroo hedduu dubbataa turaniiru. Tulluu kana irraa dhaabbatanii Laaqii Dambaal gamaafi-gamanaa, bosona magaarsuun uwwifaamte ilaaluun uumama dinqisfataa akka turan amma yeroo dhiyootti seenessaa turaniiru.
Obbo Fiqaaduun, maatii isaanii waliin Albsoo Tulluu Kaakaa yeroo muraasa eerga jirataaniin booda ammaas ,nafixanyoota duraan achi keessaa jirataa turaniin, osoo hin jaalnne dirqamaanii Albsaoo gadi dhisaanii akka irraa deemaaan godhamaan.
Yeroo lammataaf bakka irra qubatanii jirachaa turan gadi dhisaanii Godina Balee anaa Dodolaa ganda Burraa Callee jedhamee beekamu lammii Oromoo wallakkaa keessaa qubatan.
Obbo Fiqaduu Magarsaa akkuma ijoolleen Qotee bulaa Oromoo hojjaattee guddaattu tokkootti,maatii isaanii tajaajilaa erga guddataaniin booda umuriin isaanii barnootaaf akkuma gaheen mana brumsa Dodolaa Sadarkaa lammaffaa seenuudhaan kutaa tokkoo 1-8 erga barataniin booda, Qormaata biyyooleessaa kan kutaa 8tti, minsteera barnootaatiin keennnamu qaphixii olaanaandhan darbudhaan, mana barumsa “ Finininnee Comercial School “ jedhamee beekaamu galudhaan, ummurii waggaa 20tiin gosa barnoota accounting barataanii xumuruun eebbifamaniiru.
Obbo Fiqaduun brumsa Akkawuntingii barataanin Korporeeshinii (Corporation) to’annoo daldalaa oditaarii ta’uun mindeefamanii hojjataa osoo jiraani,,bara 1977, carraa barnootaa Scholarship argataanii Computer Science brachuuf gara Russia deemaan.
Bara 1983 barnoota isaanii University “Kharkiv engineering institute “jedhamee beekamu keeesaa Qaphixii olaanaadhaan eebbifamanii erga xumuraniin booda gara Sweden itti darbuun University Stockholm irraa Computer science fi IT dhan Digrii lammaffaa (Master) fudhataniiru.
Obbo Fiqaduu Magarsaa Qadhimamaa PHD ta’udhaan Korsii barnoota PHDf keennamuu barachaa osoo jianii barsiisaa akka turaniis galmeen seenaa jireenya lubbuu isaanii ni raggaasiisa.
Obbo Fiqaduu Magarsaa Muddee 19, 1993 USA Amerikaa dhufudhaan Hawaasa Oromoo Washington DC tti dabalaman. Hawaasa itti dabalamaan kanaafis keennaafi qabeenya addaa turan.
Obbo Fiqaaduun Hawaasa Oromoo Washington DCtti erga dabalamanii,irraa eegalaanii hanga guyyaa abaramtu Olkoleessa 21,2021 adeemsa isaanii xumuraanii bakka irraa galuu hin dandeenye kana deemanitti, Hawaasa Oromoo irraa dhalataan kanaaf,dadhabe, nuuffe,,rakkaadhe, osoo hin jeenne qaamaaf qalbii guutuun, beekumsaafi dandeetti qabaniin uummata Oromoo keessaafi ala jiran garagaarsaafi bu’aa, ammana jedhamee tilmaamuu hin dandeenye buusaa akka turan hundi keenyayyuu kan beekinu dha. Obbo Fiqaduu Magarsaa carraadhuma argataan hundatti gargarmaanii ijaarsa Qabsoo blisummaa Oromoof godhamu keessatti qaamaf qalbiin keessatti harmaataa akka turan galmeen seenaa jireenya lubbuu isaanii nuuf mirkaneessa.
Bara 1989-1990 keessa Swdeen Awuroopaa irraa Dirree waraana blisummaa Oromoo to’atee keessa jiraatu Damaaziin dhaquun WBOf gargaarsa barbaachiisu mara godhaniifi tajaajilaa hooggummaa isaanii barbaadu, dirree WBOn keessa jiraatuufi Sudan Kahaartum bakka Waajirri ABO jiruutti argamaanii waan namni dhugaa, Qabsa’aa Oromoo tokkorraa eegamu kaffalaa akka turan, galmeen seenaa isaani dabalee ni mirkaneessa. Obbo Fiqaduun ORA, Walda Gargaarsa Oromoo (Oromo Relief Association) keessa dadhaabbii tokko malee yeroo dheeraf dirqama fudhtaani hojjataa turaniiru.
Hawaasa Oromoo Washington DC keessatti jaalataamaafi kabajamaa, kan turaan obbo Fiqaduu Magarsaa Web -Site Oromoo Community ijaaruufi haaroomsuun qooda olaanaa keennaa turaniiru. Fiqeen akkuma hundi keenya beekinu, goota hojii Oromoo dha, bu’aa fidu, hojjachuu malee, kanaan godhe, kanaan hojjaadhe ,nama hin jeenne, nama of-hinmullifine, Qalbii guutuudhaan nama saba isaatii murannoon hojjaatu, akka ta’e hawaasiin keessa, Jiraatan , hawaasi Oromoo naannoo DMV kan beeinuu dha.
Kabajamaa obbo Fiqaduu Magarsaa, amma arabinni isaanii goggogee afaan isaanii walitti qabamutti,dhimma blisummaa Oromoo dubbataa turaniiru. Gaafa nudhisaanii nurraa deemaan ganama isaa, lubbuun isaanii keessa bahuun sa’aa muraasi yeroo haaftu, “ ani isin biraa deemuuf karaa irra jira.Isin adaraa blisummaa Oromootti jabadhaa” jechuun ergaa isaanii isa dhumaa Oromootti dhamataanii jiru. Obbo Fiqaduun nama akkanaati, nama osoo ofii hin jiraanne Oromoof jiraatee darbee dha. Nama seenaa boonsaa qabu kana inni seenaa isaa waan hin himanneef, akka nama seenaa hin qabineetti barreessina. Ammaan booda karaa Fiqeen ture qawaatu nutti dhaga’ama, qilleensi akka nu seenu beekamaadha.
Fiqeen bara 2007 keessaa yeroo akka ammaa kana Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram walumaa galatti Social median hin jirre, Web-Site sadarkaa isaa eeggate kan Oromoonni keesaaafi ala jiran dandeetti, beekumsa, ogummaa qabaniin Artii Oromoo mara dabalatee irratti dabarfatan maqaa bareeda “Ayyaantuu” jedhu itti moggasaanii Oromoof keennaniiru. Dabalatanii “Kichuu” jedhuun Website sadarkaa isaa eeggaate Oromoof banaaniiru.
Obbo Fiqaduun sagantaa Telvisinii banuuf bara 2013 – 2014 keessa Koree irratti ijaaraanii, waggoota lamaa oliif irratti dadhabaanii Jornalstoota akkuma walitti fidaanii marii akkuma xumuraanii banuuf osoo itti jiraanii jidduudhan yaada isaanii qabatanii irratti hojjataa turaan OMN waan eegaleef Sagantaa TV banuuf qaban dhisaanii Madda Walabuu Media Foundation jalatti Raadiyoo Sagalee Oromoo banuun akka Oromoon humnoomu gahee isaanii bahaa turan.
Obbo Fiqaduun waan itti amanaan ifatti falmu, ifatti dubbaatu, ejjaannoo namaafis kabajaa qabu. Adda-addumma ilaalchaa siyaasaas akka mirgatti fudhaatu. Obbo Fiqaduun Waldaa Church isaanii “Oromoo Seventh Day Adventist Church” keessattis qooda guddaa nama keennaa turaniif kan fuunduratti mul’ataan dha.
• Waldaa Qormaata Oromoo (OSA) keessattis akkuma kana, kan fuunduraatti mul’ataaniidha.
• Radioo Seifa nabalbal keessattis hogganaa Bordii ta’uun gamaatt, logistikiifi teekiniika adda addaatiin gargaaraa turaaniiru.
• Koree Tumsa gargaarsa WBO keessatti hanga gaafa dhibamaanii of dadhabaanitti barreessaa koree kana ta’uudhaan WBOn akka jabaatu ciminaan irratti hojjataa turaniiru.
• Gara hojii dhuunfaatin ammoo dhaabbata “Sprint IBM “keessa hooggummaa qabaniin waggoota 17 oliif hojjaataa akka turan seenaan jireenya isaanii ni addeessa.
Seenaa Obboleessa keenya, mararaa keenya, jaalala malee nama kamirraayyuu jibba tokkollee kan hin qabine, obbo Fiqaduu Magaarsaa Guddataa Hawaasi Oromoo Washington DC jiraannuuf, wal-yaadachiisuuf yoo ta’e malee hundi keenya qixxuma waan beekinuuf waan haaraa walitti himinu hin jiru. Yoo jiraate ammoo obboleessa akkaasii kan Oromoof malee ofii hin jiraane,jaala akkanaa dhabuun nugadisiisa.
Seenaa Fiqee ammaatti hunda isaa dubbataanii fixuun urjii lakka’uu nutti ta’a. Haata’u garuu duuti kabajamaa obbo Fiqaduu Magarsaa, biifa dachaa ta’een Oromoota keessafi ala jirru, akka numiidhaa jiru nan hubaaadha.
Akka namaatti, nama qulqulluu, nama jaalatamaa, obboleessa keenya mararaa Fiqaduu magarsaa dhabine. Akka madda beekumsaafi dandeettii, hooggummaa, muxaannoo qabeenya bakka buufamuu hin dandeenye isaan waliin dhabine. Biifa kanaan kan hubamu maatii isaanii qofa osoo hin taane hawaasa Oromooti. Kanaaf gaddi keenya dachaadha ta’a.
Eegaa, uumaa keenya ta’ee, dhalooni karaa ademaadha. Hundi keenyayyuu tarree gallee dabaree keenya eeggachaa jirra .Adeemsi keenya dheeraatuus gababatuus kan irraa haafu hin jirru. Kan haafu yoo jiraate seenaa dha. Namni yeroo lubbuun jiru caala, yeroo du’e, seenaa fi hojiin isaa fuula namaa dura dhufa. Seenaan isaa inni bareedaan, qulqulluun akka nadhii dammaa bara baraan nuwaliin jirata.
Obbo Fiqaduu Magaarsaa bara 2000 keessa Dr. Galaanee Tasammaa waliin jireenya bultii ga’eela ijaaratanii mucaa dubraa Elaine Fiqaduu bara 2002 keessa argatanii gammachuu fi jaalalan waliin jiraataa turaniiru. Mucaan isaanii tokkittiin qaban Elaine Fiqaduu barattuu Medicine waggaa 2ffaa George Washington Universityti. Obboo Fiqaduu Magarsaa Guddataa waggaa tokkoo oliif dhibmaanii mana yaalaatti deddeebi’anii yaalamaa osoo jiraanii, dhibichi itti jabannaan mana yaalaa Madstar Montagomory General Hospital jedhamee beekamu seenaanii yaalamaa osoo jiranii dhibicha irraa dandamachuu dadhabuudhaan Onkoloolessa 20, bara 2021 dhalatanii ummurii waggaa 67 tti adunyaa kanarraa darbaniiru.
Waaqni lubbuu isaaniitiif qabbana haa keennu.
Maatii isaaniif, akkasumaas hawasa Oromoo naannoo Washington DC jiraatan maraaf, hiriyoota isaanii fageenyaaf dhi’oo jiraatan hundaaf jajjabina isniif haa keennu!!!!
Qurxummichi OPDO liqimsuuf deema: Ergamtichi Wayyaanee durii, yakkamaan PP ammaa kufaati isaa jala ilmaan Oromoo abiddatti dhaquuf karoorfata